Atụmatụ nlekọta? | Martech Zone
Anọ m na Chọọchị na ngwụsị izu a ma nụ ọkwa dị egwu:
Ndị mmadụ adịghị elekọta ego ole ị mara ruo mgbe ha mara ego ole ị elekọta!
Nke ahụ kwuru, ajụjụ ahụ metụtara ozugbo maka mbọ ịre ahịa gị. Anyị na-ekwukarị banyere Mgbasa Ozi & aszụ ahịa dị ka atụmatụ a na-ejikọta ọnụ. Nke a abụghị eziokwu na "Nlekọta" anyị dị oke mkpa? Echere m bụ na Ilekọta dị oke mkpa dịka Usoro Mgbasa Ozi ọ bụla, Usoro Mgbasa Ozi, Nnyocha na Mmepe, ma ọ bụ ọbụlagodi ngwaahịa gị.
Gịnị bụ ụlọ ọrụ gị "Ilekọta" Strategy?
Tags: elekọtailekọta atụmatụnlekọta ndị ahịaatụmatụ ndị ahịa
Ndị America na-emebi emebi…